विश्वभर एकैदिन एक लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण - Khabar Break | Khabar Break
विश्वभर एकैदिन एक लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
विश्वमा बुधबार एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । २४ घण्टामा विश्वका एक लाख ६ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले जनाएको छ । यसैबीच, डब्लुएचओले कोरोना भाइरसको महामारीको गति सुस्त हुने संकेत नदेखिएको भन्दै महामारी अन्त्य हुन धेरै समय लाग्ने चेतावनी दिएको छ ।
डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले पछिल्ला दिनमा कम तथा मध्यम आय भएका देशहरुमा संक्रमण बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार थपिएका १ लाख ६ हजार संक्रमितमा झण्डै दुई तिहाई केस चार देशका मात्रै रहेको उनले बताए । कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर आधा करोडभन्दा बढी जनसंख्या संक्रमित भैसकेका छन् भने हालसम्म विश्वभर तीन लाख २९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
यसैबीच डब्लुएचओको आपतकालीन निर्देशक डा. माइक रायनले कोरोना भाइरसविरुद्धको उपचारमा मलेरियाको औषधि क्लोरोक्वीन र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनको प्रयोगप्रति सचेत गराएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले कोरोना भाइरसबाट जोगिन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन लिएको बताएकै बेला डा. रायनले औषधिको प्रभावकारिता प्रमाणित नभएकाले प्रयोग नगर्न भनेका हुन् । एजेन्सी
पाकिस्तानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ६० लाख ३१ हजार नाघे
हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै ट्वीटरले गर्दियो ट्रम्पको ट्वीट ‘हाइड’
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १७ लाख ९३ हजार
अमेरिकामा बेरोजगारको सङ्ख्या झनै बढ्यो
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या फेरी बढ्यो